दिल बहलाउने नेपालबारे ५ तथ्यहरु यस्ता छन्, सम्पुर्ण नेपालीले हेर्ने पर्ने भिडियो ! - Enepalese.com
दिल बहलाउने नेपालबारे ५ तथ्यहरु यस्ता छन्, सम्पुर्ण नेपालीले हेर्ने पर्ने भिडियो !
इनेप्लिज २०७४ माघ ७ गते १७:१८ मा प्रकाशित
देश हो जहाँअनेकौ आश्चर्यजनक परिदृश्यहरू, पहाडहरू र प्रकृतिका मनोरम दृष्यहरु रहेका छन् । हाम्रो देश नेपालको गर्विलो ईतिहास छ । जसले वर्तमान सम्म पनि विश्वसामु छाति चौडा बनाएको छ । प्राविधिक र पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकासको व्यापक सम्भावना छ, हाम्रो देशमा ।
तर हामी कति जनालाई हाम्रो आफ्नै देशका यी रोचक तथ्यहरू थाहा छैन ? हेरौं ति ५ तथ्यहरु जसले तपाईलाई जगाउने छ ।